धन - विकिपिडिया
यस लेखसँग अर्थ गाभ्नको लागि सुझाव दिइएको छ। (वार्तालाप)
धन अर्थ शब्दको पर्यायवाची हो । धनले नगद, जिन्सी र अन्य सम्पत्तिलाई बुझाउंछ । अर्थशास्त्रमा धन शब्दको विशेष अर्थममा प्रयोग गरिन्छ । कुनै वस्तु धन हुन त्यसमा निम्नलिखित तीन गुण हुनु पर्दछ–
१. उपयोगिता[सम्पादन गर्ने]
त्यो वस्तु मात्र धन हुनसक्छ जसमा मानवीय आवश्यकता सन्तुष्ट गर्ने क्षमता हुन्छ । जुन वस्तुले मानवीय आवश्यकता सन्तुष्ट गर्दैन त्यो धन हुन सक्दैन । त्यसेले उपयोगिता (युटिलिटि) धनको पहिलो गुण हो ।
२. दुर्लभता[सम्पादन गर्ने]
अर्थशास्त्रमा दुर्लभता वा सीमितता शब्दको प्रयोग रबन्सिले गरेका हुन् । यस अनुसार कुनै वस्तु थोरै छ धन्दैमा त्यसलाई दुर्लभ (सीमित) भनिंदैन । जुन वस्तुको पूर्ति मागको तुलनामा कम हुन्छ त्यो हरेक वस्ुत दुर्लभ हुनजान्छ । रबिन्सले अण्डको उदाहरण दिंदै भनेका छन्– बिक्रीका लागि राखिएका अण्डामध्ये असल अण्डा धेरै हुन्छन् र बिग्रेका अण्डा थोरै हुन्छन् । तर असल अण्डालाई नै दुर्लभ भनिन्छ र बिग्रेका अण्डालाई दुर्लभ भनिंदैन। किनभने बिग्रेका अण्डाको माग नै हुंदैन ।
३. हस्तान्तरीयता[सम्पादन गर्ने]
उपयोगिता र दुर्लभ भइकन पनि यदि हस्तान्तरीयताको गुण छैन भने त्यसलाई धन भन्न सकिंदैन । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिको सीप उपयोगी हुन्छ, दुर्लभ हुन्छ, तर त्यसलाई किनबेच गर्न सकिंदैन । त्यसैले गायकको गायनकला, डाक्टरको रोगी जांचने कला, शिक्षकको पढाउने कला धन हुंदैनन् , तर यी सेवा भने धन हुन्छन् । किनभने धन हस्तान्तरीय हुन्छन् ।
एडॅप्टिव एक्सपेक्टेशन · भुगतान सन्तुलन · केन्द्रीय बैंक · मुद्रा · स्वर्ण मानक · ग्रेशमको नियम · मुद्रास्फीति · आई एस/एल एम प्रतिमान · धन · राष्ट्रीय आय एवं निर्गत को मापक · मौद्रिक नीति · राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन लेखे · पर्चेसिंग पवर पॅरिटी · युक्तियुक्त प्रत्याशाएँ · रीगोनमिक्स · मन्दी · बेरोजगारी · विकास · अर्थशास्त्रीय शीर्षकों को सूची · आर्थिक भूगोल सम्बन्धी शीर्षकों को सूची · अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी शीर्षकों को सूची · अर्थशास्त्र मा प्रकाशनहरु को सूची
न्यूनता · अवसर लागत · पूर्ति एवं माग · प्रत्यास्थता · आर्थिक अधिशेष · आर्थिक न्यूनता · एग्रीगेट माँग · उपभोक्ता सिद्धान्त · बजार स्वरूप · कल्याणकारी अर्थशास्त्र · बजार को असफलता
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र · विकास अर्थशास्त्र · श्रम अर्थशास्त्र · पर्यावरण अर्थशास्त्र · संस्थागत अर्थशास्त्र · नर्मेटिव अर्थशास्त्र · व्यवहारपरक अर्थशास्त्र · प्रयोगात्मक अर्थशास्त्र · वित्तीय अर्थशास्त्र · औद्योगिक संगठन · लोकवित्त · अर्थशास्त्रीय दर्शन · आर्थिक समाजशास्त्र · आर्थिक भूगोल · सकारात्मक (सामाजिक विज्ञान) · विधि र अर्थशास्त्र · राजनीतिक अर्थशास्त्र
अर्थमिति · संगणकीय अर्थशास्त्र · हेटरोडक्स अर्थशास्त्र
प्राचीन अर्थशास्त्रीय चिन्तन · चिरसम्मत अर्थशास्त्र · मार्क्सीय अर्थशास्त्र · नव-चिरसम्मत अर्थशास्त्र · संस्थागत अर्थशास्त्र · कीन्सीय अर्थशास्त्र · अर्थशास्त्र को शिकागो सम्प्रदाय · अर्थशास्त्र को अस्ट्रियाई सम्प्रदाय
एडम स्मिथ · डेभिड रिकार्डो · कार्ल मार्क्स · जन मेनार्ड कीन्स · मिल्टन फ्रिडम्यान · लड्विग वन मिसेस · रैग्नर फ्रिश · पल सैमुअल्सन · अझ बढी
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=धन&oldid=540177" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:५९, १६ मार्च २०१६ मा परिवर्तन गरिएको थियो।